Maxaa ka hir gali kara heshiiska doorashada ee la saxiixay? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxaa ka hir gali kara heshiiska doorashada ee la saxiixay?
Dhaqan-galka qodobka 8-aad ee ku addan in Ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka Musharraxiinta kursiga ku tartamaya, waa fududahay haddii aysan jidgooyo u dhigan madaxda maamullada sidii ay hore u sameeeyeen.
MUQDISHO, Soomaaliya – Keydmedia Online, waxa ay falanqeyn ku sameyneysaa qaar ka mid ah qodobbadaii ka soo baxay shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka, kaas oo 3 - 9 Janaayo 2022 ka socday magaalada Muqdisho, isla-markana ujeedadiisu aheyd, in lagu saxo qaladaaddkii ka soo baxay qodobadii iyo habraacyadii lagu heshiiyay 24 Ogoosto 2021.
Si guud 18-ka qodob ee Axaddii la siixay, wax weyn kagama gaddisna kuwii hore, marka laga yimaado dhowr qodob oo kala caddeyn, amarro iyo tilmaamid isugu jira, kuwaas oo u muuqda in lagu qurxinayay war-murtiyeedka.
Qodobbada 2aad iyo 6aad, waxaa lagu xusay in la caddeeyo, la madax banneeyo lana shaaciyo magacyada xubnaha Guddiga soo xulista ergada ee ka kooban Duubabka iyo Caaqillada raasmiga ah iyo Bulshada Rayadka ah ee Beelaha ama Jufooyinka Kursiga wadaaga.
Qodobbadaan, wuxa ay unug u ahaayeen carqaladaha hareeyay doorashada, waana halka uu salka ku hayo dhamaan boobka kuraasta ee ay masuulka ka yihiin Madaxda Maamullada, sixidda qodobbadaan iyo u dhaqan galinta sida loo qorsheeyay wuxuu wax weyn ka baddeli karaa caqabaddii tagneyd.
Inta badan kuraasta hore loo doortay, lama marsiin hannaankaan, taasina waxa ay sababtay, in qeyb ka mid ah xubnaha soo baxay ay doortaan ergo aan ku qabiil ahayn ama aan ku jirin jufooyinka kursiga isla leh.
Qeyb kale, waxaa oday dhaqan, saxiixe kursi iyo ergo doorasho looga dhigay, ciidanka ka tirsan Nabad-sugidda oo diyaarado looga daabulay Caasimadda, taas oo dhalisay buuqa ugu weyn ee dooashadii boobka ahayd.
Qodobbada 2aad, 3ad iyo 4-aad, si la mid ah, qodobkii hore, ayaa hore loo seejiyay hannaankii loo qorsheeyay, waxaana si taban ugu takrifalayay hogaamiyayaasha maamullada.
Sida la rumeysan yahay hirgalinta qodobka 3-aad waxay noqon kartaa mid adag, maadaama uu meesha ka saarayo owooddii boobayasha.
Qodobka, 16-aad oo dhigaya in CQS ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha Siyaasadda, kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta Amniga, waa mid aan heshiis la saxiixay iyo hadal afka laga yiri ku suuroobi karin, maadaama Farmaajo uusan marnaba joojin doonin kala jabinta ciidanka iyo abuubulka xasaradaha.
Muddada loo asteeyay in la gabagabeeyo doorashada Golaha Shacabka ee u dhaxeysa 15 Janaayo ilaa 25ka Febaraayo, waxay iyana u muuqataa mid aan suura-gal ahayn, maadaama la fahasanyahay in doorashadu u qabiran tahay wax ka baxsan qodobbada la saxiixay.